တောင်တရုတ် ပင်လယ်ရှိ ကျွန်းများကို ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်စွာ ချဲ့ထွင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း - Yangon Media Group
ပေကျင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၅
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အငြင်းပွားတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ ၄င်းတို့၏ ကျွန်းများကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီး ရေဒါစခန်းအပါအဝင် ယခုနှစ်ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများသည် အကျယ်စတုရန်းမီတာ ၂ သိန်း ၉ သောင်းခန့်ရှိခဲ့ကြောင်း အစိုးရ၏ အစီရင်ခံစာအသစ်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းသည် ယခုလအစောပိုင်း၌ အမေရိကန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုက ဖော်ပြသော ကိန်းဂဏန်းများနှင့် ဆင်တူသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကျွန်းစုများနှင့် သန္တာကျောက်တန်းအချို့်တွင် ကျယ်ပြန်သော့ ကုန်းမြေပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လေဆိပ်များတည်ဆောက်ခြင်းအပါအဝင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ထိန်းချုပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်နှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုသတိပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုများသည် ရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ကူညီရန်ဟု ဆိုသော်လည်း စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်လည်း ရှိသည်ဟု တရုတ်ကဆိုသည်။ ထို့ပြင် ၄င်းတို့၏ နယ်မြေပိုင်နက်အတွက် ၄င်းတို့ ဆန္ဒရှိသည့် မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
တရုတ်အမျိုးသားအဏ္ဏ၀ါ ဒေတာနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှု ဌာနက ဖန်တီးထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အစီရင်ခံစာ အသစ်ထဲ၌ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၄င်းတို့၏ စစ်ရေးတည်ရှိမှုကို တိုးမြှင့်နေပြီး ကျွန်းများက ဖုံးလွှမ်းထားသော ဒေသကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ချဲ့ထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
လက်စွမ်းပြနေသော ဂိုးသမား ကာရီယက်စ်ကို ဦးစားပေး ဂိုးသမားအဖြစ် လီဗာပူး အသုံးပြုတော့မည်
”တစ်နှစ်မှာ တစ်ကားတည်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်ကို လာကမ်းလှမ်းတဲ့ ဇာတ်ကို ကျွန်တော်ကြိ?
ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း တည်ဆောက်နေမှုကို ကန့်ကွက်သည့် ဒေသခံတစ??